अष्ट्रेलियामा बारटेन्डरमा जागिरको अवसर र कमाइ - थाहापाइराखौ ! —
५ माघ २०७७, सोमबार ०८:३१ admin	0 Comments
अष्ट्रेलिया : कानुनी रुपमा मान्यता प्राप्त बारमा आफ्ना ग्राहकहरुलाई खानाको साथै पेय पदार्थ (अल्कोहल / नन अल्कोहल ) सर्भ गर्ने पेशा बारटेन्डर हो। बारटेन्डरले पब , रेस्टुरेन्ट , होटेल , रिसोर्ट , नाइट क्लब , क्याफे ,क्यासिनो का साथै अफिसहरुमा पनि काम गर्न सक्छन्।
बारटेन्डर पेशा अपनाउनका लागि ग्राहकसंग मीठो बोली र सभ्य व्यवहार गर्न सक्ने खुबी हुनु अत्यावश्यक हुन्छ।
बारटेन्डरको जिम्मेवारी र काम
१ – बियर , कक्टेल ,वाइन ,जुस ,पानी, सफ्ट ड्रिंक्स लगायतका पेय पदार्थ ग्राहकको चाहना अनुसार तयार पारि सर्भ गर्नु
२ – खाना र पेय पदार्थ बनाउने ठाउँ सफाका साथै त्यहाँ भएका सबै सामानहरुको हेरविचार तथा मर्मत सम्भार गर्नु
३ – अर्डरको पेमेन्ट लिन र ह्यान्डल गर्न सक्नु
४ – बीलिंग मसिन ओपरेट गर्नु
५ – पिउने ग्लासहरु जम्मा पारेर सफा गर्नु
६ – बियर केग ट्याप गर्नु
७ – पेय पदार्थ बनाउने र सर्भ गर्ने ठाउँ स्वास्थ्य र सुरक्षाको मापदण्ड अनुसार व्यवस्थापन गर्ने
८ – ग्राहक र ग्राहकका बीच वा आफू र ग्राहक बीच केही घटना भईहाले बार मेनेजर र सेकुरिटी गार्ड संग सम्पर्क गर्ने
अष्ट्रेलियामा बारटेन्डर बन्नका लागि ‘रेस्पोंसिबल सर्भिस अफ अल्कोहल (आरएसए )’ को सर्टिफिकेट हुन जरुरी हुन्छ। यो छोटो स्पेसल कोर्स हो। क्लासमा गएर या अनलाइन माध्यमबाट पनि यो कोर्स गर्न सकिन्छ।अष्ट्रेलियामा बारटेन्डरको तलब प्रति घण्टा औसतमा २६ अष्ट्रेलियन डलर छ। सिप, क्षमता, कामको अनुभव र कम्पनीको नियम अनुसार तलब फरक-फरक हुनसक्छ।
यो पनि पढ्नुहोस ! अष्ट्रेलियामा एज्ड केयर वर्करको लागि आवश्यक योग्यता, गर्नुपर्ने काम र तलब थाहा पाइराखौ !
अष्ट्रेलिया : वृद्धवृद्धालाई जीवनयापनका दैनिकी काममा सहायता गर्नु एज्ड केयर वर्करको मुख्य काम हो। वृद्धवृद्धाहरुको उमेर र स्वास्थ्य अनुसार केयर वर्करको काम पनि भिन्न-भिन्न हुनसक्छ। कसैकसैलाई भावनात्मक साथीको मात्रै खाँचो रहेको हुनसक्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरुसंग केयर वर्करले भावनात्मक रुपले सहयोग गर्नुपर्छ।
केयर वर्करको काम एज्ड केयर होम अथवा क्लाइन्टको घरमै पनि हुनसक्छ। जागिरको समय पनि क्लाइन्टको आवश्यकता अनुसार फरक हुनसक्छ। कोहि बेला क्लाइन्टको स्वास्थ्य कमजोर, हिँडडुल गर्न नसक्ने अवस्थामा उनीहरुलाई उठाउने ,बसाल्ने , डुलाउने काम पनि गर्नुपर्छ। उमेर पाकेको व्यक्ति रिसाउने ,कुरो प्रस्ट नबुझ्ने , बोल्न नसक्ने छ भने केयर वर्करले धर्यता तथा संयमता पूर्वक काम गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरुमा केहि समस्या देखिएमा उनीहरुको घरपरिवार तथा मेडिकल वर्करलाई छिटो भन्दा छिटो सम्पर्क गर्नुपर्छ।
एज्ड केयर वर्करका लागि चाहिने योग्यता :
एज्ड केयर वर्करको योग्यता क्लाइन्टको आवश्यकता अनुसार फरक रहेको छ। कति ठाउँमा केयर वर्करका लागि हाई स्कुल डिप्लोमाको सर्टिफिकेट अथवा सो सरहको सर्टिफिकेट भए पुग्छ भने कतिपय ठाउँमा केयर वर्करका लागि नर्सिङ्ग विषयमा डिग्री अथवा ब्याचलर गरेको व्यक्तिको माग हुन्छ। त्यस्तै काम सम्बन्धि अनुभव भएको व्यक्तिलाई पनि प्राथमिकता दिईन्छ।
अष्ट्रेलियामा एज्ड केयर वर्करको तलब
पेस्केलका अनुसार, अष्ट्रेलियामा एज्ड केयर वर्करको औसत तलब प्रति घण्टा २२.८२ अष्ट्रेलियन डलर रहेको छ। एज्ड केयर वर्कर सम्बन्धि कामको एक वर्ष भन्दा कम कामको अनुभव भएको व्यक्तिले टिप्स, बोनस ,ओभरटाइम सबै गरेर प्रति घण्टा औसत २१.७८ अष्ट्रेलियन डलर पाउँछ। त्यस्तै एक देखि चार वर्षको काम सम्बन्धि अनुभव हुनेले २२.६३ पाउँछ भने पाँच देखि नौ वर्षको अनुभव हुनेले २३.५६ पाउँछ। सम्बन्धित काममा दश देखि उन्नाइस वर्षको अनुभव भएको व्यक्तिले प्रति घन्टा औसत २४.३३ पाउँछ। यो तलब औसतमा हो। काम गर्ने व्यक्तिको दक्षता तथा संस्थाको नियम अनुसार तलब घटीबढी हुनसक्छ।
यो पनि पढ्नुहोस ! अष्ट्रेलियाको PR भिसा प्राप्त गर्नको लागि उमेर हद थाहा पाइराखौ !
अष्ट्रेलिया । अष्ट्रेलियाको स्किल्ड इनडिपेनडेन्ट भिसा (सबक्लास १८९) भिसाको लागि सरकारले उमेर हद तोकेको हुन्छ। यो अष्ट्रेलियामा स्थायी रुपमा बसोवास गर्न पाउने र काम गर्न पाउने स्थायी भिसा (पीआर) हो।यो भिसा अष्ट्रेलियामा आफूले काम गर्ने कम्पनीले स्पोन्सर गरेमा, आफ्नो परिवारको सदस्यले स्पोन्सर गरिदिएमा, राज्य या सरकारको नोमिनेसनमा परेको पेशामा संलग्न भएमा प्राप्त गर्न सकिन्छ। र, यसको लागि स्किल टेस्ट समेत पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।
पीआरको लागि आवेदन दिने व्यक्तिको उमेरदेखि लिएर शैक्षिक योग्यता, चारित्रिक प्रमाण, सिप तथा दक्षता, अंग्रेजी भाषा दक्षता, कामको अनुभव आदिको मापन गरिन्छ। मापन गर्दा पोइन्ट (अंक) दिइन्छ। पीआरको लागि आवेदकले सबैमा गरेर न्युनतम कुल ६५ पोइन्ट्स प्राप्त गर्न जरुरी हुन्छ।आवेदकको उमेरको लागि पनि अंक छुट्टाइएको हुन्छ। अष्ट्रेलियामा पछिल्लो नियम अनुसार, ४४ वर्ष उमेर भन्दा माथिका व्यक्तिले यो भिसा प्राप्त गर्न सक्दैनन्। त्यसभन्दा मुनिका लागि कुन उमेरको व्यक्तिलाई कति अंक दिइन्छ त ? यस्तो छ उमेर अनुसार पोइन्ट सम्बन्धि नियम :
१८ देखि २४ वर्ष – २५ पोइन्ट्स
२५ देखि ३२ वर्ष – ३० पोइन्ट्स
३३ देखि ३९ वर्ष – २५ पोइन्ट्स
४० देखि ४४ वर्ष – १५ पोइन्ट्स
यो पनि पढ्नुहोस ! अष्ट्रेलियाको PR र नागरिकतामा के फरक छ ? थाहा पाइराखौ !
अष्ट्रेलिया : अष्ट्रेलियाको पीआरका आफ्नै विशेषता हुन्छन् । पीआरवाहकलाई शिक्षा, औषधि उपचारमा आर्थिक सहायता उपलब्ध हुन्छ ।यस्तै अष्ट्रेलियाको पीआर लिएको व्यक्तिलाई न्युजिल्यान्डमा पनि भ्रमण गर्ने, बस्ने, काम गर्ने, पढ्ने अनुमति हुन्छ । अष्ट्रेलिया सरकारले तोकेको मापदण्ड वा योग्यता अनुसार प्रत्यक पाँच वर्षमा पीआर नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।अष्ट्रेलियाको नागरिकता पाइसकेपछि भिसा नविकरणको आवश्यकता पर्दैन ।
अष्ट्रेलियाको पासपोर्ट स्वतः पाइन्छ । अष्ट्रेलियाको राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय रुपमा संलग्न हुन सकिने तथा भोट गर्ने अधिकार हुन्छ।त्यस्तै, अष्ट्रेलियाको नागरिकता भएमा शिक्षा, औषधि उपचारमा आर्थिक सहायता, सरकारी छात्रवृत्ति, सरकारी जागिर आदिमा अधिकार हुन्छ । आफ्नो जीवनसाथीलाई अष्ट्रेलिया लैजान पाउँछन् । न्युजिल्यान्डमा भ्रमण गर्ने, बस्ने, काम गर्ने, पढ्ने अनुमति हुन्छ ।अष्ट्रेलियाको नागरिकता लिएको बाबुआमाबाट जन्मेको बच्चाले वंशजको आधारमा अष्ट्रेलियाको नागरिकता पाउँछ ।
यो पनि पढ्नुहोस ! अष्ट्रेलियाको स्टुडेन्ट भिसाका फाइदाहरु – थाहा पाइराखौ
अष्ट्रेलिया : अष्ट्रेलिया आएर पढ्दा यहाँको जीवनशैलीसँग रमाउँदै आफ्नो योग्यता र सीप पनि बढाउन सकिन्छ।अष्ट्रेलियामा विश्व मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयहरु ,प्राक्टिकल भोकेसनल कलेजहरुका साथै अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि विभिन्न इङ्ग्लिश लेङ्गुएज स्कूलहरु रहेका छन्।यदि तपाईं पनि अष्ट्रेलिया आएर यहाँ बसोबास गर्न चाहनुहुन्छ भने अष्ट्रेलियन स्टुडेन्ट भिसा तपाईंका लागि उपयुक्त हुन्छ।
अंग्रेजी भाषा कक्षा, ,भोकेसनल कोर्स अथवा युनिभर्सिटीका ब्याचलर ,मास्टर्स तथा पीएचडी कोर्सको अध्ययनका लागि स्टुडेन्ट भिसाको आवेदन भर्न सकिन्छ। अष्ट्रेलियामा स्टुडेन्ट भिसाको आवेदनका लागि उमेरको हद तोकिएको छैन। अष्ट्रेलियाको स्टुडेन्ट भिसाका फाइदाहरु :
अष्ट्रेलियामा स्टुडेन्ट भिसाको आवेदनका लागि उमेरको हद तोकिएको छैन।
अष्ट्रेलिया आएर यहाँ पढ्नका साथै जागिर पनि गर्न पाइन्छ।
अष्ट्रेलियाको छोटो तथा लामो समयको भिसा प्राप्त गर्न सकिन्छ।
अष्ट्रेलियन डिप्लोमा प्राप्त गर्न सकिन्छ।
पोस्ट – ग्राजुएट भिसा प्राप्त गर्न सकिन्छ।
पार्टनर अथवा परिवारको सदस्यलाई आफूसँग अष्ट्रेलिया लैजान अनुमति पाइन्छ।
पढाइ तथा कामको सन्तुलन मिलाएर अगाडी बढ्न सकेमा पीआरको लागि समेत बाटो बनाउन सकिन्छ।
← भाग्य होइन, कर्मको देश हो अष्ट्रेलिया
२० वर्षपछि मिडियामा आउँदा श्रीकृष्ण श्रे’ष्ठलाई सम्झदै रोइन राजमति (भिडियो सहित ) →
अष्ट्रेलिया उडानको लागि क्वान्टासद्वारा जुलाईको लागि टिकट बुकिङ्ग खुला, सरकारले दियो यस्तो प्रतिक्रिया
२१ पुष २०७७, मंगलवार १०:५४ admin	0
अस्ट्रेलियाको भिक्टोरिया सरकारद्वारा सबक्लास १९० र ४९१ भिसाको लागि योग्यता मापदण्डमा परिवर्तन
१० पुष २०७७, शुक्रबार १०:०३ admin	0